I-SG okanye i-LFR I-Roller Bearings Abakhiqizi kunye nabathengi - umbane wase-China - i-Rihoo Industry.
Iimpawu ze-Roller no-Rail
I-Mini Groove Ball Bearings encinane
Ezinye iibhereji zeBhola ezincinane
Ikhaya > Iimveliso > Track Roller Bearings > I-SG okanye i-LFR I-Roller Bearings
I I-Roller Bearings
I-SG okanye i-LFR I-Roller Bearings
Imizila Yesikhokelo seNtambo
Oku kulandelayo malunga neSG okanye i-LFR I-Roller Bearings ehambelana nayo, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi i-SG okanye i-LFR ye-Roller Bearings.
Iimpahla eziphethe i-Gothic Arch groove
SG .. LFRâ € | I-Series Track Roller Bearings ihambelana nomzila we-cylindrical kwi-systemar motion motion. Imiqulu iqukethe ibhola yokudibanisa ye-row angular ephethe isakhiwo sayo sangaphakathi kunye nesithintelo sangaphandle. Zenziwe zenyuka- Ezinye iindidi zazo zinokuthi zenziwe kwi-resistance corrosion resistance stainless steel.
Umsebenzi we-SG series series rollers ufana neLFR series. Kodwa zona zisetyenziswe ngokubanzi kwisitratti esicacileyo kunye nesakhiwo se-compact. Emva kokuba ama-rollers afakwe kwi-slider, i-shaft ayiyi kuba okanye ayikho emfutshane kwiiplanti zecala le-roller.
I-Rihoo Icandelo lenye yeendlela ezivelele zePlay Roller Bearings kunye nabathengisi baseTshayina, bamkele ukuthenga kunye nokuthengiswa kwezinto eziqhelekileyo ze-sg okanye i-lfr zokuhamba kwee-roller bearings ezenziwa eChina kwisitokisi kuthi.
Iifayile ezishisayo: I-SG okanye i-LFR I-Roller Bearings, i-China, abavelisi, abaxhasi, i-factory, i-wholesale, ithengi, i-Customized, umgangatho ophezulu, isaphulelo, ixabiso lentengo, ixabiso eliphantsi, isampuli yamahhala, isicatshulwa
I-LV I-Roller Bearings
I-LR Iimiqulu ze-Roller Bearings
Uhlobo lwe-Stud Type Track Roller Bearings
Ukulandelela abalandeli be-Roller Bearings Cam
Idilesi: I-15, i-Yangjia, isiXu sase-Xu, i-Wanshi, isitalato saseZhuangshi, isithili saseZhenhai, i-Ningbo, i-Zhejiang, i-315201, i-China
SGR Series Isikhokelo sikaloliwe2020/05/20
I-SGR Rails zenziwe ukusuka kumgangatho ophezulu, ngokuchanekileyo i-aluminium extrusions. I-Rc60 ishafti eqinileyo eyicinezelekile kwi-extrusion ukuqinisekisa ukuchaneka. Ibhlokhi ingaphakathi kojantshi
Isiseko esitsha seMveliso yeRihoo yokuKhwela ibaroli kunye neendlela zesikhokelo2020/02/15
Isiseko sebalandeli bekham (kubandakanywa nalabo bahamba ngokuhamba)2019/05/17
Abalandeli bakaCam banamashishini okudlulisa amandla kunye nomthwalo ojikelezayo ophethe umthwalo xa bekhonza njengombonakalo phakathi kwamacandelo oshishino ozimeleyo. Izicelo ziquka ezo zitheyibhile ezijikelezayo kunye nabahambisa umbane, iiyunithi zokudlulisa i-robot (i-RTUs), kunye ne-array of mechanical customization.
Iimpawu zoMgca oMgca weeRbotic Positioning2019/04/09
HANNOVER MESSE 2019, uHanver, eJamani2019/04/04
UHanverver Messe yiyona nto ibalulekileyo kwihlabathi. UHanverver Messe uyaziwa njengomnye wezobugcisa obunobungcali kwiJamani.
Iibhola ezincinci zebhola ezinobuncinane be-grooves ebhokheni kwi-40% engumthunzi, ukungcola, ukungcola kunye nokungcola okubangelwa ukubola.
Ukusetyenziswa okusemgangathweni Omncinane weGroove Ball Bearings2019/03/21
Kuyafaneleka kuzo zonke iindidi zezixhobo zorhwebo, intsimbi encinci yokujikeleza isivinini esincinci esincinane, njenge: Iifowuni zeeofisi, ii-motor-motor
Uhlobo lweMveliso yeMigqabi e-Deep Groove Ball Bearings2019/03/21
Ukugqithwa okuncinci kwamabherethi amancinci, iintlobo ziquka i-miniature bhoove bear bear series, 68, 69, 60 series, total 6 inch r series
I-LYC yokuThengisa iNombolo yePentent Record2018/08/07
Qinisekisa kwi-teknoloji ephethe umhlaba
I-Copyright Â © I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited Amalungelo alondoloziweyo.